5 Social IZIRingTA Nzọụkwụ maka Ahịa ọkachamara | Martech Zone
Zutere onye ahịa taa onye ghọtara ihe bụ isi nke Twitter, Facebook, LinkedIn, wdg. Achọrọ m ịnye ha ụfọdụ nzaghachi na. malite iji na-eji mmadụ mgbasa ozi nke ọma. Onye ahịa ahụ bụ ọkachamara na-ere ahịa ma chọọ ịmalite iji ohere nke onye na-ajụ ase ma ọ maghị nke ọma otú ọ ga-esi dozie ọrụ ya chọrọ ka ọ na-agbalite usoro mgbasa ozi mmekọrịta.
Nke ahụ bụ nsogbu nkịtị. Ịkparịta ụka n'onlinentanet adịghị ka ịkparịta ụka n'ịntanetị. Na-ezute ndị mmadụ, mata njikọta, ma chọta ma wulite mmekọrịta gị na ndị na - eme ihe na atụmanya. Nweghị ike ịbanye n'ime mmemme mbụ nke mmiri ozuzo ma mee nke a (Ndị na-eme mmiri ozuzo bụ a mpaghara ịkparịta ụka n'ingntanet otu nke ahụ nwere mgbawa mgbawa). Ọ na - ewe oge, chọrọ igwu ala, ma mechaa malite ịmalite ịba uru na netwọkụ gị. Nke a bụ eziokwu n'ịntanetị dịka ọ na-anọghị n'ịntanetị.
Nzọụkwụ 5 iji mee nke ọma na ịkparịta ụka n'Socialntanet iji zụọ ahịa
Nweta ntanetị: Mee gị LinkedIn profaịlụ, imeghe a Twitter akaụntụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ngwangwa usoro ahụ (ma tinyekwuo oge), bido dee blog na ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị blog, chọta blọọgụ ndị ọzọ ị nwere ike itinye aka na.
Chọpụta njikọta: Otu ụzọ dị ngwa iji chọta njikọta na otu gị bụ isonye na ntanetị dị ka LinkedIn. Na Twitter, ị nwere ike ime nke a site na eme hashtags na ịchọta ndị n'azụ ụlọ ọrụ ndị ahụ tweets. Advanced ngwaọrụ dị ka Uwaegu 6 nwekwara ike inyere aka ebe a!
Maka blọọgụ, mgbanwe kachasị ọhụrụ na Teknụzụ nwere ike inyere gị aka belata ebumnuche gị. Me nyocha blog maka okwu dịka CRM nwere ike inye gị ndepụta nke blọọgụ, ka ị wee nwee mmasị na ya! Tinye ndepụta ndị a na ọkacha mmasị gị na-agụ nri!
Mee mmekọrịta: Ozugbo ịchọtara ndị njikọ, bido itinye uru na ọdịnaya ha site na itinye onyinye dị mkpa na nkwupụta na tweets. Emela nkwado onwe gị… ndị a abụghị ndị folks azụ ngwaahịa gị, ha bụ ndị ga- okwu gbasara ngwaahịa na ọrụ gị.
Adọrọ a na-esonụ: Site na itinye aka na mkparịta ụka na ikike ụlọ na ụlọ ọrụ gị - ndị njikọ ga-ekwu maka gị na ndị na - eme ihe ike ga - amalite iso gị. Isi ihe dị ebe a bụ inye, nye, nye… ị gaghị enwe ike inyezu ya. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere ndị mmadụ na-ezu ohi ozi gị ma jiri ya na-enweghị akwụ gị ụgwọ… emela! Ndị folks ahụ agaghị akwụ gị ụgwọ, agbanyeghị. Ndị bụ ndị ga- ụgwọ bụ ndị ka ga-akwụ.
Nye ụzọ itinye aka: Nke a bụ ebe blog na-abịa kemfe! Ugbu a ị na-enwetara ndị mmadụ anya, ịkwesịrị ịkpọghachite ha ka gị na ha zụọ ahịa. Maka blog, ọ nwere ike ịbụ oku na-eme na sidebar gị ma ọ bụ ụdị ịkpọtụrụ. Nye ụfọdụ akwụkwọ ndebanye aha maka nbudata ma ọ bụ webinars. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ, nye profaịlụ LinkedIn gị ka ijikọ ha. Ihe ọ bụla ị kpebiri, dị njikere ijide n'aka na ọ dị mfe ịchọta… ọ dị mfe karị ijikọ gị, ka ndị mmadụ ga-eme.
IZIR SocialTA ịkparịta ụka n'isn'tntanet abụghị ihe isi ike mana ọ nwere ike iwe ogologo oge. Dị nnọọ ka itinye ihe mgbaru ọsọ ahịa maka ọnụ ọgụgụ oku ị na-akpọ, ọnụ ọgụgụ nke nzukọ ị na-aga na ọnụ ọgụgụ nke mmechi ị na-eme… amalite itinye ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ị na-achọ, ọnụ ọgụgụ ị na-eso, na-ejikọ, ma na-eso na. Ozugbo ị malitere egwuregwu gị, wepụta onwe gị maka post ọbịa ma ọ bụ nwee njikọ ndị ahụ ma ọ bụ nwee ndị ọbịa na post blọgụ gị. Audizụ ndị na-ege ntị bụ ụzọ dị mma iji gbasaa netwọkụ gị.
Ka ị na-aga n’ihu na-arụ ọrụ netwọkụ gị ma na-eme mmekọrịta gị na ndị njikọ na ndị na - eme ihe ike, ị ga - enweta nkwanye ugwu ha ma mepee onwe gị ohere ị na - amabeghị. Ana m achọ kwa ụbọchị ugbu a, na-ekwu okwu mgbe niile, na-ede akwụkwọ ma nwee azụmaahịa na - eto eto - nke a wuru site na atụmatụ ịkparịta ụka n'socialntanet. O were ọtụtụ afọ iji bia ebe a - mana ọ bara uru! Kpọgidere ebe ahụ!
Tags: ntanetị n'ịntanetịndị ọkachamara n’ire ahịaahịa mgbasa ozinetwọk mgbasa ozi mmekọrịtana-elekọta mmadụ na-ere
Ngwaọrụ Ahịa Kasị Ukwuu!
Mezuo nkwa gị
Nov 12, 2009 na 3:03 PM
N'ịbụ onye na-emechi oge na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ozi a nwere ike ịhapụ m ka m nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma na oge m na-eme atụmatụ iji nọrọ na-aga n'ihu n'ihu dịka ọkachamara - metụtara mgbasa ozi mmekọrịta. Daalụ maka nghọta Doug.
Nov 12, 2009 na 3:33 PM
Do na-arụ ọrụ mara mma nke ịkọwapụta na mmekọrịta mmekọrịta ahụ ka bụ isi ọrụ arụmọrụ. Agbanyeghị, ụfọdụ n'ime usoro agbanweela ma ọ bụ kwalite.
Echere m na ndị mmadụ na-efu ụfọdụ ezigbo ohere mgbe ha na-ibelata mmadụ mgbasa ozi dị ka usoro maka ịmata ohere na ngwa ngwa ndibiat na-eme mmekọrịta.
Jenụwarị 5, 2017 na 3:16 PM
Networkzụlite netwọkụ mmekọrịta na-ezigara gị ike nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na azụmahịa gị karịa ihe ọ bụla ị na-eme n'afọ a. Jiri ngwa dị ka free Referrals-In.com iji lelee LinkedIn maka ịmalite netwọkụ mmekọrịta gị na ntanetị.